झु’किएर पनि खा’ली पे’टमा खान न’हुने खानेकुरा
रोचक झु’किएर पनि खा’ली पे’टमा खान न’हुने खानेकुरा
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: बेलाबखत ‘लिची खाएर बालबच्चाको मृ’त्यु’ भन्ने ख’बर आउँछ । खासगरी भारतमा यस किसिमको घ’टना दोहोरिरहन्छ। वास्तवमा लिची वि’षालु हुन्छ ? यो खान न’हुने फल हो ?
पक्कै होइन । तर, खाली पे’टमा खाँदा श’रीरभित्र हुने रा’सायनिक प्रतिक्रियाको कारण यो घा’तक बन्ने गर्छ । लि’ची आ’फैँमा स्व’स्थ्यवर्द्धक फल हो । यसको अर्थ के भने कुनैपनि खानेकुरा सही ढंगले से’वन गर्नुपर्छ । जस्तो दू’ध–दही अति स्व’स्थ्यकर मनिन्छ ।
तर, दू’ध र दही कुन बेला खाने र कुन बेला न’खाने भन्ने कुरा पनि छ । हरेक खानेकुरालाई सही ढंगले, सही समयमा, सही मात्रामा से’वन गर्दा मात्र त्यसबाट लाभान्वित हुने हो । नभए त खानेकुरा नै वि’ष समान हुनपुग्छ । अतः यहाँ त्यस्तै खानेकुराको चर्चा गरिएको छ, जो खाली पे’ट खानु हा’निकारक हुनसक्छ ।गो’लभेँडा गो’लभेँडा स्वादिलो हुन्छ र स्व’स्थ्यकर पनि ।
यसलाई अचार बनाएर खान सकिन्छ, तरकारीमा मिसाउन सकिन्छ । सलादकै रुपमा पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ । तर, गुणकारी गो’लभेँडा खाली पे’टमा भने से’वन गर्नुहुँदैन । यसमा ए’सिड पाइन्छ, जसले खाली पे’टमा रा’सायनिक क्रिया हुन्छ । यसले पे’टमा अघु’लनशील जे’ल निर्माण गर्छ । यो जे’ल पे’टमा स्टोन बन्ने कारण बन्नसक्छ । दही दही स्वा’स्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । यसले पाचन क्रियामा पनि राम्रो अ’सर गर्छ । तर, खाली पे’टमा दही से’वन गर्दा त्यसले उल्टो असर गर्छ ।
के’रा के’रा खानु राम्रो हो । तर, खाली पे’टमा के’रा सेवन गर्दा नराम्रो अ’सर गर्छ । यसले शरी’रमा म्या’गनेसियम बढ्छ। जसले गर्दा क्या’ल्सियम र म्या’ग्नेसियको सन्तुलन बिग्रिन्छ । औ’षधि धेरैजसो औ’षधि खाली पे’टमा से’वन गर्दा प्रभावहीन मात्र हुने होइन, हानि’कारक पनि हुनसक्छ । खाना खाइसकेपछि मात्र खाने औ’षधि आफुखुसी खाली पे’टमा सेवन गर्नुहुँदैन ।
म’दिरा त्यसो त म’दिराले स्वा’स्थ्यमा नराम्रो अ’सर पुर्‍याउँछ । तर, खाली पे’टमा यसको अ’सर अझ बढी हा’निकारक हुन्छ । खाली पे’टमा म’दिरा सेवन गर्दा त्यसको न’कारात्मक प्रभाव श’रीरमा पर्छ र अनेकौं रो’गको जन्म दिन्छ । म’सलेदार कहिले पनि खाली पे’टमा मसलेदार खानेकुरा से’वन गर्नुहुँदैन । त्यस्ता खानेकुराले पाचनयन्त्रमा गम्भीर अ’सर पुर्‍याउनसक्छ ।
कफी गर्मीमाभन्दा पनि जाडोमा कफीको ल’त बढी लाग्छ । अन्य समयमा कफी पिउनु खासै नराम्रो मानिँदैन। यद्यपि खाली पे’टमा भने कफी से’वन गर्नु हानिकारक हुन्छ । सो’डा सोडा खाली पे’टमा से’वन गर्नुहुँदैन । किनभने यसमा उ”च्च मात्रामा कार्बोनेट ए’सिड हुन्छ । यदि तपाईंले यसलाई खाली पे’टमा पिउनुभयो भने नराम्रो अ’सर गर्छ ।